रिङरोडबारे केही सवालहरू :: Setopati
राम राज शर्मा बेलायत
रिङ रोडको बारेमा निकै बहस भैइरहेको छ। पक्षविपक्षमा बाँडिएका छन् सबै। म सडक विज्ञ वा जानकार त होइन तर श्रृङखलाबद्ध लेखहरूबाट केही बुझेको छु। मेरो मनमा आएका कुराहरू यस प्रकारका छन्:
१. के उक्त सडकको फिजिबिलिटी वा डिटेल डिजाइन गर्दा वातावरणीय र सामाजिक अध्ययन गर्ने क्रममा सामाजिक सुनुवाई भयो? भएको थियो भने उक्त सुनुवाईका सुझावहरू समेटेर डिजाइन गरियो? गरिएन भने त्यो सिधै गलत छ।
२. के निर्माण अवधिभर प्रभावित स्थानीय र अन्य सडक प्रयोगकर्ताले आफ्ना सुझावहरू राख्न पाउँदैनन्। गलत कामको विरोध गर्न पाउँदैनन्? के आफ्ना सुझाव राख्दा निर्माण भाँड्न खोजेको हुन्छ?
३. के चीनिँया सरकार र कम्पनीले अनुदानको नाममा नेपालभित्र जे पनि गर्न पाउँछ? अनि प्रभावितहरू सम्पन्न नहुने बेलासम्म चुप लागेर बस्नुपर्ने हो? सडक विभागका प्रमुखले समेत हामी केही गर्न सक्दैनौँ चीनिँया अनुदान हो, सम्पन्न भएपछि सुधार हुन्छ भन्नु नेपालको सार्वभौम सत्ता माथिको सीधा हस्तक्षेप होइन? किन बोल्दैनन् राष्ट्रवादीहरू?
४. अहिले निर्माणको कर्ममा किन विरोध पहिला किन नगरेको भन्नेले सम्पन्न भईसकेपछि समस्या भोग्दा, निर्माण हुँदै किन विरोध नगरेको भन्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? जनताले नराम्रो कामको जुनसुकै बेला विरोध गर्न पाउँछन् भन्ने बुझेको खै?
५. इन्जिनियारिङ भनेको समस्या निम्त्याउनु होइन समस्या समाधान गर्नु हो। यो बाटोले समस्या निम्त्याएको छ। यो इन्जिनियरिङको विपरित छ। यो सडक सम्बन्धी केही लेख र सामाजिक संजालका कुराहरू देखेर यो प्रतिकृया लेख्न मन लाग्यो। विकासको नाममा विनाश निम्त्याउँदै छौँ हामी। जथाभावी डोजर लगायर बनाएका ग्रामीण सडकबाट केही त सिक्नु पर्ने हो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २६, २०७४, ०६:५१:२०